FAQ Jikelele - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Ii-FAQs zokwenziwa kwePCB:
Yintoni eyenziwa yiPCBFuture?
I-PCBFuture ngabavelisi behlabathi abachwepheshile ababonelela ngobuqhetseba be-PCB, indibano yePCB kunye neenkonzo zokufumana izixhobo.
Loluphi uhlobo lweebhodi zePCB ozenzayo?
I-PCBFuture inokuvelisa iintlobo ezininzi zee-PCB ezifana nee-PCBs ezine/ezimbini, ii-PCB zamanqanaba amaninzi, ii-PCB eziqinileyo, ii-PCB eziguquguqukayo kunye ne-Rigid-flex PCBs.
Ingaba unabo ubuncinci be-odolo yobungakanani (MOQ) kwii-odolo zePCB?
Hayi, i-MOQ yethu yemveliso yePCB sisiqwenga esi-1.
Ngaba uyabonelela ngeeSampulu zePCB zasimahla?
Ewe, sibonelela ngeesampulu zePCB zasimahla, kwaye i-qty ayikho ngaphezulu kwe-5 pcs.Kodwa kufuneka sibize iisampulu kuqala, kwaye sibuyise ixabiso lesampulu ye-PCB kwimveliso yakho yobuninzi ukuba ixabiso le-odolo yesampulu yakho alikho ngaphezulu kwexabiso lemveliso yobuninzi be-1% (Akubandakanyi imithwalo).
Ndingalufumana njani ucaphulo olukhawulezayo?
Ungathumela iifayile kwi-imeyile yethu sales@pcbfuture kwikowuteshini, sinokucaphula kuwe kwiiyure ezili-12 ngokuqhelekileyo, ngokukhawuleza kunokuba yimizuzu engama-30.
Ndingazenza iibhodi zam zenziwe kwiiphaneli?
Ewe, sinokusebenza ngeefayile zePCB enye kwaye senze iibhodi kwiiphaneli.
Ngaba ndingabeka nje iodolo yePCB engenanto?
Ewe, sinokubonelela kuphela ngenkonzo yokwenziwa kwePCB kubathengi bethu.
Kutheni usebenzisa inkonzo yokucaphula i-intanethi
PCB online quote ukusebenza nje ngexabiso elirhabaxa kunye nexesha elikhokelayo, sicacisa kumgangatho ophezulu PCB imveliso, ngoko ke iinkcukacha DFM itshekhi kunye nokuchaneka kubalulekile.Sinyanzelisa ukudibanisa umatshini kunye nomsebenzi wezandla ukunciphisa umngcipheko woyilo lwabathengi.
Ubala njani ixesha eliphambili lemveliso yePCB?
Ixesha lokukhokela i-PCB liya kubalwa emva kokuba zonke ii-EQs zokwenziwa kwe-PCB zisonjululwe.Ngee-odolo zesiqhelo zenguqu, bala ukususela kusuku olulandelayo lokusebenza njengosuku lokuqala.
Ingaba unayo i-DFM ejonga uyilo lwethu?
Ewe, sinokubonelela ngenkonzo ye-DFM yasimahla kuzo zonke iiodolo.
Ii-FAQ zendibano yeTurnkey PCB:
Ngaba uyabonelela ngendibano ye-PCB yomzekelo (umthamo ophantsi)?
Ewe, sinokubonelela ngenkonzo yeprototype ye-PCB ye-turnkey kwaye i-MOQ yethu sisiqwenga esinye.
Zeziphi iifayile ozifunayo kwii-odolo zendibano yePCB?
Ngokuqhelekileyo, sinokucaphula ixabiso kuwe ngokusekelwe kwiifayile zeGerber kunye noluhlu lwe-BOM.Ukuba kuyenzeka, Khetha kwaye ubeke iifayile, umzobo wendibano, iimfuno ezikhethekileyo kunye nemiyalelo engcono ukuba uhlanganyele nathi.
Ngaba ubonelela ngenkonzo yendibano yasimahla yomzekelo wePCB?
Ewe, sibonelela ngenkonzo yendibano yasimahla yeprototype yePCB, kwaye i-qty ayikho ngaphezulu kwe-3 pcs.Kodwa kufuneka sibize iisampulu kuqala, kwaye sibuyise ixabiso lesampulu ye-PCB kwimveliso yakho yobuninzi ukuba ixabiso le-odolo yesampulu yakho alikho ngaphezulu kwexabiso lemveliso yobuninzi nge-1% (Akubandakanyi imithwalo).
Yintoni ifayile yeKhetha kunye neNdawo (ifayile ye-Centroid )?
khetha kwaye ubeke ifayile ikwabizwa ngokuba yifayile yeCentroid.Le datha, kubandakanywa i-X, i-Y, ukujikeleza, icala lebhodi (ukuya okanye kwicala lecandelo elisezantsi) kunye nomqambi wereferensi, unokufundwa yi-SMT okanye i-thru-hole machine assembly.
Ngaba uyabonelela ngenkonzo yendibano yePCB yeturnkey?
Ewe, sibonelela ngenkonzo yendibano ye-PCB ye-turnkey, ebandakanya ukuveliswa kweebhodi zeSekethe, i-Components Sourcing, iStencil, kunye ne-PCB yabemi kunye novavanyo.
Kutheni le nto amanye amaxabiso avela kuwe aphezulu kunalawo ukuba athengwe sithi?
Izixhobo ze-elektroniki ezithunyelwa eChina kufuneka zongeze i-VAT ye-13% kwaye ezinye zazo kufuneka zihlawulwe ngoMrhumo, owahlukileyo kwikhowudi ye-HS yecandelo ngalinye.
Kutheni amanye amaxabiso avela kuwe ephantsi kunexabiso elibonisa kwiiwebhusayithi zabahambisi?
Sisebenza nabaninzi abasasazi abadumileyo abafana neDigi-Key, iMouse, iArrow kunye nokunye, ukusukela isixa esikhulu sokuthenga sonyaka, basinika isaphulelo esisezantsi kakhulu.
Ixesha elingakanani kufuneka ucaphule iiprojekthi ze-Turnkey PCB?
Ngokubanzi kuthatha i-1-2 yeentsuku zokusebenza ukuba sicaphule iiprojekthi zendibano.Ukuba awukhange uyifumane ikowuti yethu, unokujonga ibhokisi ye-imeyile kunye nefolda ye-jun yayo nayiphi na i-imeyile ethunyelwe kuthi.Ukuba akukho imeyile ethunyelwe sithi, nceda uqhagamshelane kabini sales@pcbfuture.com uncedo.
Ngaba ungaqinisekanga ngomgangatho wamacandelo ePCB yethu?
Ngamava eminyaka, iPCBFuture yakha izixhobo ezithembekileyo zejelo kunye nabasasazi abaziwayo okanye abavelisi behlabathi.Sinokufumana inkxaso engcono kunye nexabiso elihle kubo.Ngaphezu koko, sineqela lokulawula umgangatho ukuze lihlole kwaye liqinisekise umgangatho wamacandelo.Unako ukuphumla kumgangatho wamacandelo.
Ndingayifumana iakhawunti yetyala?
Kubathengi bexesha elide abasebenzisana nathi ngaphezulu kweenyanga ezintandathu kunye neeodolo rhoqo ngenyanga, sinikezela ngeakhawunti yetyala enemiqathango yokuhlawula yeentsuku ezingama-30.Ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu kunye nokuqinisekiswa, nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kubuyela kuwe ngokukhawuleza.